7-da Caado ee Codsiga Shabakadda Guusha 2.0 | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 30, 2006 Arbacada, Oktoobar 8, 2014 Douglas Karr
Dion Hinchcliffe ayaa maqaal weyn ku qoray Ajax Developers Journal, waa kuwan qoraalkayga aan jeclahay:
Waxyaabaha Muhiimka u ah Bixinta Shabakada 2.0
Habka Isticmaalka waa muuqaalka ugu muhiimsan ee shabakad kasta, codsi shabakadeed, ama barnaamij.
Fur xogtaada intii suurtogal ah. Mustaqbal kuma lihi xog uruurinta, kaliya xakameynta.
Si gardarro leh wax ugu dar wareegsan jawaab celinta wax walba. Jiid wareegyada aan u muuqan kuwa muhiim ah oo xoogga saar kuwa natiijooyinka bixiya.
Wareegyada sii deynta ee joogtada ah. Sii-dayntu markay sii weynaato, ayaa sii adkaanta waxay noqoneysaa (ku-tiirsaneyaal badan, qorsheyn dheeraad ah, khal-khal badan.) Kobaca jirka waa midka ugu awoodda badan, la qabsi iyo adkeysi badan.
Ka dhig isticmaaleyaashaada qayb ka mid ah barnaamijkaaga. Iyagu waa ilaha ugu qiimaha badan ee aad ka kooban tahay, ra'yi-celinta, iyo xamaasadda. Bilaw fahamka qaab dhismeedka bulshada. Iska daa xakamaynta aan muhiimka ahayn. Ama isticmaalayaashaadu waxay u badan tahay inay aadi doonaan meelo kale.
Codsiyadaada u rog madal. Codsi badanaa wuxuu leeyahay hal adeeg oo horay loo sii cayimay, madal loo naqshadeeyay inay aasaas u noqoto wax ka weyn. Halkii aad hal nooc oo adeegsi ah ka heli lahayd softiweerkaaga iyo xogtaada, waxaad noqon kartaa boqollaal ama kumanaan iyaga ka mid ah.
Ha u abuurin bulshooyin bulsheed kaliya inaad yeelato. Ma ahan shayga liiska hubinta. Laakiin awood u siiya isticmaaleyaasha dhiirrigeliya inay iyagu abuuraan.
Waxaan ku dari lahaa hal shay oo dheeri ah, ama waxaan ku ballaadhin lahaa 'Fududeynta Isticmaalka'. Fududeynta Isticmaalka waxaa ku jira 2 qaybood:
Adeegsiga - habka uu adeegsadaha u adeegsado fulinta waa inuu noqdaa mid dabiici ah oo aan u baahnayn tababar xad-dhaaf ah.
Naqshad weyn - Waan necbahay inaan qirto tan, laakiin naqshad aan caadi ahayn ayaa ku caawin doonta. Haddii aad haysato codsi bilaash ah, laga yaabee inaysan muhiim ahayn; laakiin haddii aad iibineysid adeeg, markaa waa rajo inaad yeelato muuqaallo qurux badan iyo qaabab bog.
U rogo arjigaaga meherado iyo wareegyo sii-deyn isdaba-joog ah labadaba waxay isku amaahiyaan tikniyoolajiyadda 'widget, plugin, or add-on'. Haddii ay jirto qaab loo dhiso qayb ka mid ah dalabkaaga oo u oggolaanaya kuwa kale inay wax ka dhisaan, waxaad ka faa'iideysan doontaa horumarka si ka baxsan derbiyada shirkaddaada.
Ma hubo inaan ku raacsanahay 'Fur xogtaada' laakiin waxaan ku raacsanahay inaan ka faa'iideysto xogtaada. Xogta furan ee maanta iyo da'da waxay noqon kartaa cabsi qaas ah; si kastaba ha noqotee, ka faa'iideysiga xogta ay isticmaaleyaashaadu siinayaan waa rajo. Haddaan i waydiiyo sidaan u jeclahay kafeega, waxaan rajaynayaa in marka xigta ee aan qaxwo helo, ay tahay sida aan u jeclahay! Hadeysan ahayn, horta ha i weydiinin!
Tags: horumarintamadalWebsaytka 2.0
Wararka baroorta ah news war xun oo aad u xun Wargeysyada